“Sehatra iray goavana iankinan’ny asa fampandrosoana ny fadintseranana noho izy miantoka ny 45%-n’ny tetibola amin’ny ankapobeny. Mila endrika vaovao ny fadintseranana », hoy ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian, ka « tokony ho matihanina sy handeha amin’ny fahamarinana ireo tompon’andraikitra amin’ny fanatanterahana ny asany. Ny tsy fahamarinana no nampahantra sy nambotry ny firenena, noraisiny ho ohatra ny fanodikodinana nisy tao amin’ny fadintseranana nandritra ny telo taona, ka nahaverezana 600 miliara Ariary, vola izay tokony niditra tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana ».
“Mbola ambany ny tahan’ny fampidiran-ketra eto amintsika raha oharina amin’ireo firenen-kafa ka tokony hakarina izany, tanjona araka izany ny hampakarana izany ho 15% ao anatin’ny fotoana fohy raha toa ka 12% izany amin’izao fotoana izao”, hoy ny Praiminisitra.
Sandam-bola: Miha-mitotongana ny Ariary »